Dhizaini Dhizaini, Yekuchenesa Sevhisi, Yakachena Zvigadzirwa- Airwoods
Isu Tinotarisa pane Innovative HVAC & Cleanroom Mhinduro
AIRWOODS inotungamira pasi rese mupi wezvigadzirwa zvemagetsi zvine simba, zvinofefetera uye zvemhepo (HVAC) zvigadzirwa uye mhinduro dzakazara dzeHVAC kumisika yekutengeserana neyemaindasitiri. Kuzvipira kwedu ndekwe kupa vatengi vedu mhando dzepamusoro dzemhando yepamusoro uye zvigadzirwa pamitengo inodhura.
Vane ruzivo rwehunyanzvi
Yegore Rakazara Purojekiti
System Bvunza & Implementation
Ipa masevhisi ekubvunza uye nemazano, kusarudzwa kwechigadzirwa uye dhizaini dhizaini zvinoenderana nemapurojekiti.
Oversea Kuisirwa & Commissioning
Airwoods yekumisikidza timu ine yakakura pane-saiti kuvaka, kuisa uye kutumira ruzivo.
System Solution & Zvishandiso
Ipa mhinduro dzakagadziriswa nedesheni, kutenga, kutakura, kuisa, kudzidzisa uye kutumira mabasa.
Operation Kudzidziswa & Mushure mekutengesa Sevhisi
Ipa ruzivo rwehunyanzvi kubatsira vatengi zvirinani kugadzirisa yavo system, kudzikisira kukanganisa uye kuwedzera nguva yemuchina webasa.
Kuzvipira kwedu ndekwe kupa vatengi vedu mhando dzepamusoro dzemhando yepamusoro uye zvigadzirwa pamitengo inodhura.
Kubva pane zvekushandisa kudzora kusvika kune yekudzivirira kwevanopinda, kubva kuvhidhiyo yekutarisa kusvika kune cybersecurity.
Yemazuva ano Farm Indoor Kurima
Nesainzi yemhepo yekugadzirisa mweya, hunyanzvi hwekurima hwemukati me stereo yekurima iri kuve inozivikanwa nekuda kwekukwirira kwayo uye kugadzikana kwekugadzira mune rese gore, uye inobatsira pundutso.
Imba yekuchenesa kana yakachena imba inowanzo shandiswa sechikamu chehunyanzvi hwekugadzira maindasitiri kana kutsvagisa kwesainzi, kusanganisira kugadzirwa kwezvinhu zvemishonga uye microprocessors.
Yekudhinda yekugadzira maitiro voltatile organic makomputa (VOCs) anobva kuinki ...
HVAC system ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kukosha munzvimbo dzekudyira / muhotera iyo ...
Anochinja manyowa makemikari
Airwoods VOC kurapwa, kutonga uye kugadzirisa mhinduro, yakaderera ine njodzi mweya inosvibisa ...
Kana zvasvika kudzidzo, yakawanda yenguva tinoreva kuchikoro uko vese vadzidzi ...
Ongorora nzvimbo yevhidhiyo yekuratidzira kweprojekiti uye zviwanikwa zvedzidzo.
Holtop Modular Mhepo Yakatonhora Chiller NePombi Yekupisa
Imwe Kamuri Wall Yakakwira Ductless Heat Energy R ...
Mhepo Inochenesa ine Disinfection Basa
Modular Mhepo-yakanyorova Mupumburu Chiller
CVE Series Permanent Magnet Synchronous Inverte ...
Yakasimudzwa DX Mhepo Kubata Chikamu
Mvura Yakadzora Mhepo Kubata Units
VOCs Kurapa SYSTEM
Ndira 22, 2021
Ndira 13, 2021